အိုင်တီလောကမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ cisco - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
25-03-2011, 08:00 PM
ဒီပိုစ်လေးကို cisco ကိုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အထောက်ကူဖြစ်အောင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဒဿဂီရိ, ဖန်ဆင်းရှင်, ဘုန်မောင်, ရှိုင်းသော်တာမင်း, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, နေမင်းမောင်, arkaraung, AZM, bagothar85, kaunghtet3419, kyawswarl, Lwin Thu, minthike, minthumon, moe_poung, pannuko, PyaitSone, rabpig, runner.zaw, themoon49, thura.it, Ye Aung, yelinoo, zo
ပြန်စာ - အိုင်တီလောကမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ cisco
ကျွန်တော်က networking ကိုအခုမှစတင်လေ့လာမှာဖြစ်လို့ CCENT certificate ကိုအထောက်အကူပြုစာအုပ်စာတန်းနဲ့ စံပယ်ဗွီဒီယို လေးများရှီ ရင် မျှကြပါအုံးခင်ဗျ
ဒီမှာလည် ကိုဘွဲ ဖွင့်ထားတဲ့ Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေမျှရအောင်
cisco ရဲ့ router , switch , hub အကြောင်းကိုဒီမှာရှိပါတယ်
CCNP Certification Training - General
Free CCNA, CCENT Tutorial
Last edited by thureinsoe; 09-04-2011 at 05:48 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဘွဲ, ကိုဦး, အမြင့်ပျံလင်းယုန်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bagothar85, Lwin Thu, minthike, minthumon, thura.it, yelinoo, zo
ကျွန်တော်ကြိုးစားလေ့လာ ပါ့မယ် . မြန်မာလိုစာအုပ်စာတန်း. ဂျာနယ်များ (for CCENT) ရှိရင်လည်းမျှကြပါအုံးခင်ဗျ
ကိုလွင်သူ လို အပ် မဲ့ ထင်တဲ့ စာအုပ်များကို ကျွန်တော်
တွေ့ ထားသလောက် ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
The CCNA exam is difficult and I would not have passed it if I did not have this book with me. The CCNA Exam Cram is an indispensable resource that guided me from the introduction of networking fundamentals to the application of networking theories. Whether you need to learn from scratch or just needaquick reference, this book is an excellent guide that will definitely reinforce your knowledge of Cisco networking and prepare you for the CCNA.” –Vincent Gov, CCNA
* Complete coverage of CCNA exam objectives
* Realistic exam questions for effective practice
* Multiple exam modes
* Flash Card format
ဒါကကျွန်တော် တို့ဖိုရမ် ရဲ့အိုင်ကွန် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုကြီး kznt ရဲ့blog မှာ ဆွေးနွေးတဲ့
အမြင့်ပျံလင်းယုန်, နေမင်းမောင်, bagothar85, kyawswarl, Lwin Thu, minthike, minthumon, thura.it, yelinoo, zo
CCENT ကိုစင်္ကာပူ မှာဖြေ လို့ လျှင် ဘယ်လို register လုပ်ရတယ်၊ exam centers တွေနဲ့ exam fee ဘယ်လောက်ကုန် သလဲ ဆိုတာ သိတဲ့ သူရှိ ရင် ပြော ပြပေးပါ ခင် ဗျ
အားလုံးကို အမြဲ လေးစားလျက်
ဒါပေမဲ့ လင့်ခ်တွေက သေကုန်ပြီ...... ပြန်တင်ပေးပါဦးနော်.......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kokhing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ccna အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေချင်ပါတယ်.။ ccna ရဖို့ ဆို. ccna တစ်ဘာသာပဲ တန်းဖြေရမှ အဆင်ပြေမှာလား
ဒါမှ မဟုတ် CCNA ရဖို့ . ၂ ဘာသာခွဲ ဖြေလို့ ရလား သိချင်ပါတယ.
နားမလည်လို့ ဝင်မေးတာပါ. ဖြေဖို့ လည်း ကြိုးစားနေလို့ ပါ။..။ ပိုက်ဆံ မရှိတော့. ၂ဘာသာခွဲ ဖြေရရင်တော့သိပ်
ကောင်းမှာပဲ ။ ................။
CCNA နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေချင်တယ် - သင်တန်းတက်ချင်တယ် - Certificate တွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ -
CCNA နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာ Certificate တွေ ရှိလဲ ဆိုတာအရင် သိဖို့လိုတယ်။ အတိုချုံးပြီး ပြောရရင် CCNA ကို Cisco Certified Network Associate လို့ခေါ်တယ်။ သူ့အောက်မှာ Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) ဆိုတဲ့ တစ်ဆင့်ရှိပြီး သူ့အထက်မှာ Professional > Expert > Architect ဆိုပြီး နောက်ထပ် သုံးဆင့် ကျန်သေးတယ်။ နောက်ပြီး CCNA မှာမှ တစ်ခြား အထူးပြု ဘာသာရပ်ခွဲတွေ ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာ B.Sc ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ကို သိပ္ပံအထူးပြုတိုင်းရပေမယ့် သူ့မှာ B.Sc(Maths), B.Sc(Physics) ... ဆိုပြီး ကွဲသွားသလိုပဲ - CCNA မှာမှ CCNA Routing and Switching ဆိုတာရှိတယ်။ CCNA Security ဆိုတာရှိတယ်။ နောက်ပြီး CCNA Service Provider ဆိုတာရှိတယ်။ CCNA Service Provider Operations ဆိုပြီးလည်း ရှိသလို နောက်ထပ် CCNA Data Center တို့ CCNA Wireless တို့ CCNA Video တို့ ဆိုတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။
အဲ့တော့ CCNA ဆိုတဲ့ စာမေးပွဲကြီးကို မဖြေခင်မှာ ကိုယ်က ဘယ်လိုင်းကို လိုက်မှာလဲ။ ကိုယ့်မှာ ခုနက ပြောခဲ့တာတွေထဲက ဘယ် Field အတွေ့အကြုံ ရှိထားသလဲ။ အဲ့တာပေါ်မူတည်ပြီး အရင်ဆုံး ကိုယ်အထူးပြုမယ့် Field ကိုရွေးရမယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ ကောင်းမယ်ထင်တာ ရွေးလိုက်မိတာမျိုး၊ သူများညွှန်းလို့ ယူလိုက်မိတာမျိုး ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားယူမှ ရမယ့် အနေအထားမျိုးတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး B.Sc ဘွဲ့လို့ တစ်ခါရ တစ်သက်လုံး သုံးစားလို့ ရနိုင်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ CCNA ရပြီးရင် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ နှစ်အကန့်အသတ်အတွင်းမှာပဲ CCNA Certificate ကို အသိအမှတ်ပြုတယ်။ အဲ့နှစ်ကျော်သွားရင် Recertify ပြန်လုပ်ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက CCNA ပြီးယုံနဲ့လည်း ရပ်နေလို့မရဘူး။ နောက်ထပ် Level တွေဖြစ်တဲ့ Professional > Expert > Architect ဆိုတဲ့ Certificate တွေရဖို့ ထပ်ဖြေရလိမ့်ဦးမယ်။ အနည်းဆုံးတော့ Professional အဆင့်ထိ ဖြေထားသင့်တယ်။ အဲတာမှလည်း နိုင်ငံခြားထွက်ဘာထွက်ဆို မျက်နှာပန်းလှမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေလည်း တစ်ခြားဘာမှမလုပ်တောင် CCNA နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာသင်စားလို့ရတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်ဖြေမယ့် Level ကိုလိုက်ပြီး အနည်းနဲ့အများကွာခြားမှုရှိတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ CCNA Routing and Switching ကို 200-120 CCNA Routing and Switching ဆိုတဲ့ စာမေးပွဲ တစ်ခုပဲဖြေပြီး Certificate ယူမယ်ဆိုရင် USD 295.00 လောက်ကျမယ်။ နှစ်ခါခွဲပြီး 100-101 ICND1 နဲ့ 200-101 ICND2 ဆိုပြီး ဖြေမယ်ဆိုရင် Exam တစ်ခုကို USD 150.00 နဲ့ နှစ်ခုပေါင်း USD 300.00 လောက်ကျသွားမယ်။ ခုပြောတဲ့ဈေးက တစ်ခြား ဘာညာသာဓကာကြေးမှ မပါသေးဘူး။ သင်တန်းတွေကနေမှ တဆင့်ဖြေမယ်ဆိုရင် ဝန်ဆောင်ခတို့ဘာတို့က လာနိုင်သေးတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကိုယ်တက်တဲ့ သင်တန်းပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်။
ခုပြောခဲ့တာတွေ အားလုံးက CCNA နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေချင်တဲ့သူတွေ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အခြေခံတွေ ပြောခဲ့တာပါ။ အကျယ်သိချင်ရင် ကိုယ်တက်တဲ့ သင်တန်းမှာ စုံစမ်းနိုင်သလို http://www.cisco.com/ မှာလည်း လေ့လာနိုင်တယ်။ စာမေးပွဲကြေးတွေကိုတော့ http://www.vue.com/vouchers/pricelist/cisco.asp#prices မှာ ကြည့်နိုင်တယ်။
Last edited by KznT; 17-09-2014 at 07:48 PM..
ဖိုးသားလေး89, ဇော်ရဲပိုင်, Aung Aung, htun30, kyawswarl, thureinsoe, tu tu, Ye Aung
Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေမျှရအောင် ကိုဘွဲ Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 45 30-11-2015 04:23 PM